ဘဏ်ကတသောင်းတန် ဆယ်အုပ်ပါတစီးထဲမှ တသောင်းတန်အစား တထောင်တန် 39 ရွက် ပါလာ – MEDIALANN
ကျွန်တော့်လို မဖြစ်အောင်အားလုံးကိုသတိပေးချင်ပါတယ် ??
အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မေးချင်တာက ဒီလိုမှားပီးညှပ်ထည့်လာတာကို ကျွန်တော်တို့သိသိကြီးနဲ့ သူတို့ဘက်ကအဲ့ဒီနေ့အတွက် စာရင်းလည်းအကုန်ကိုက်တယ် မှန်တယ် ဆိုတော့ကာ သူတို့ဘဏ်က ငွေစာရင်းဘယ်လိုယုံကြည်ရပါ့မလဲ??
နောက်ဆိုရင်ကောကျွန်တော့တို့ ငွေအမောင့်များများထုတ်တိုင်း အချိန် မပေးနိုင်လို့ တအုပ်ချင်းစီ တရွက်ချင်းစီမစစ်ခဲ့ရင် ဘဏ်ကိုဘယ်လိူယုံကြည်ရတော့မလဲ ဒီလိုပဲညှပ်ပါနေတော့မှာလား??
သူတို့ဘဏ်ကလည်း တံဆိပ်တုံးအရှေ့အနောက်ထုပီး လက်မှတ်လည်းထိုးထားပါတယ် ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ ဒီလိုတုံးထုပီးလက်မှတ်ထိုးတယ်ဆိုတာ ဒီငွေကိူသုံးယောက်လောက်စစ်ထားတဲ့သဘောပါ အဲ့ဆို ဒီစစ်တဲ့သုံးယောလုံးကလည်းသေချာမစစ်ခဲ့တဲ့သဘောပေါ့ ??
#အားလူံးပဲနောက်ဆို KBZ ဘဏ်ဆိုတာ ဒီလိုမှားတတ်တဲ့အတွက် တရွက်ချင်းစီ တအုပ်ချင်းစီအချိန်ယူပီးသေချာစစ်ကြပါလို့?ကျွန်တော့် လစာနဲ့ရင်းပီးသင်ခန်းစာရခဲ့ပါတယ်လို့ ??#
ကျွန်တော့်လို မဖြစ်အောင်အားလုံးကိုသတိပေးချင်ပါတယ် ??မနေ့ က ညောင်ဦးမြို့နယ် ပုဂံမြို့သစ် KBZ ဘဏ်ခွဲ မှာ company မှ…
Geplaatst door Soe Htike Thu op Dinsdag 11 juni 2019
ကြှနျတေျာ့လို မဖွဈအောငျအားလုံးကိုသတိပေးခငျြပါတယျ ??
အဲ့ဒါဆိုကြှနျတျောမေးခငျြတာက ဒီလိုမှားပီးညှပျထညျ့လာတာကို ကြှနျတျောတို့သိသိကွီးနဲ့ သူတို့ဘကျကအဲ့ဒီနအေ့တှကျ စာရငျးလညျးအကုနျကိုကျတယျ မှနျတယျ ဆိုတော့ကာ သူတို့ဘဏျက ငှစောရငျးဘယျလိုယုံကွညျရပါ့မလဲ??
နောကျဆိုရငျကောကြှနျတော့တို့ ငှအေမောငျ့မြားမြားထုတျတိုငျး အခြိနျ မပေးနိုငျလို့ တအုပျခငျြးစီ တရှကျခငျြးစီမစဈခဲ့ရငျ ဘဏျကိုဘယျလိူယုံကွညျရတော့မလဲ ဒီလိုပဲညှပျပါနတေော့မှာလား??
သူတို့ဘဏျကလညျး တံဆိပျတုံးအရှအေ့နောကျထုပီး လကျမှတျလညျးထိုးထားပါတယျ ကြှနျတျောသိသလောကျတော့ ဒီလိုတုံးထုပီးလကျမှတျထိုးတယျဆိုတာ ဒီငှကေိူသုံးယောကျလောကျစဈထားတဲ့သဘောပါ အဲ့ဆို ဒီစဈတဲ့သုံးယောလုံးကလညျးသခြောမစဈခဲ့တဲ့သဘောပေါ့ ??
#အားလူံးပဲနောကျဆို KBZ ဘဏျဆိုတာ ဒီလိုမှားတတျတဲ့အတှကျ တရှကျခငျြးစီ တအုပျခငျြးစီအခြိနျယူပီးသခြောစဈကွပါလို့?ကြှနျတေျာ့ လစာနဲ့ရငျးပီးသငျခနျးစာရခဲ့ပါတယျလို့ ??#
ထူးဆန်းလွန်းတဲ့ ဦးခေါင်း၂ လုံးပါတဲ့ နွားပေါက်လေး မွေးဖွား